माहिर खेलाडी अजित डोभलसँग सिंगापुरमा देउवाको भेट भयो ?
सरल संवादताता / (फायल तस्बिर: नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भातीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल ।)
काठमाडौं । भारतमा असाध्यै शक्तिशाली मानिन्छन् अजित डोभल । त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीपछिका शक्तिशाली उनै डोभल मानिन्छन् । र, अजित डोभल बारम्बार सिंगापुर गइरहन्छन् । उनी कतिबेला सिंगापुर जान्छन्, कतिबेला फर्कन्छन् भन्ने भारतीय संचार माध्यमहरुले पनि खासै भेउ पाउँदैनन् ।
नेपाली नेताहरुले असाध्यै भेट गर्न मन गर्ने पात्र पनि उनै डोभल हुन् । तर, केही महिना यता नेपाली नेताहरुको भारत भ्रमण स्वाट्टै घटेको छ । भारतको ठाउँ सिंगापुरले लिएको छ । त्यसो भए डोभलसँग नेपाली नेताहरुको भेट हुँदैन त ?
भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार पदमा रहेका डोभल प्रधानमन्त्रीका निर्णायक नीति निर्माता मानिन्छन् । नेपाललाई नाकावन्दी लगाउने डिजाइनर पनि उनैलाई मानिन्छ । नेपाल र हिन्दूत्वमा असाध्यै चासो राख्ने डोभलले गुप्त भेटघाटहरु सिंगापुरमा गर्ने गरेको भारतीय मिडियाहरुले लेख्ने गरेका छन् ।
यस बीचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिंगापुर भ्रमणमा गएका छन् । अहिले कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । त्यसै गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सिंगापुर पुगिरहन्छन् ।
विगतमा पनि प्रचण्ड बारम्बार सिंगापुर गएका थिए । उनी गएकै मौकामा डोभल पनि सिंगापुर पुगेको र दुईको भेटघाट भएको दावी कतिपय संचार माध्यमहरुले गरिसकेका छन् ।
अहिले देउवाले डोभललाई भेट्छन् त ? देउवा निकट स्रोतका अनुसार खासमा देउवा उपचारकै लागि गएका हुन् तर साथमा राजनीतिक उद्देश्य पनि छ । उद्देश्य हो डोभलसँग भेट गर्ने ।
तीन साता अघि नै देउवा सिंगापुर जाने भनिएको थियो । तर ‘केही दिन यता बिकसित राजनीतिक परिस्थिति’लाई ध्यानमा राख्दै उनले भ्रमण स्थगित गरे । खासमा त्यसबेला त्यस्तो कुनै राजनीतिक परिस्थिति बिकास भएको थिएन । डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका थिए, उनको समर्थनमा तरुण दल र नेविसंघले जुलुस निकालेका थिए । यसैलाई ‘केही दिन यता बिकसित राजनीतिक परिस्थिति’ भनिएको थियो ।
केसीको अनसन र नेविसंघको जुलुसका कारण देउवाको भ्रमण स्थगित भनेर कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले घोषणा गरेका थिए । भ्रमण स्थगनको कारण हास्यास्पद थियो ।
देउवा निकटहरु भन्छन्— डोभलसँग सिंगापुर भेट अनिश्चित भएपछि भ्रमण स्थगित गरिएको थियो ।
प्रचण्डले भेटे ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिमले एउटा सूचनामा निकै आँखा लगायो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत महिना सिंगापुर गएका थिए । पत्नीको उपचारका लागि उनी गएका थिए । सिंगापुर भ्रमण उपचारमा मात्र सीमित रहँदैन भन्ने ओलीको टिमले नबुझ्ने कुरै थिएन ।
‘त्यसबेला प्रचण्डले डोभललाई भेटेका थिए,’ प्रधानमन्त्री निकटहरुको दावी छ । त्यो भेटकै बिकासक्रम स्वरुप केही दिनपछि प्रचण्ड भारत जाँदैछन् । उनको भ्रमण भदौ २१ बाट हुनेछ ।
प्रचण्ड अहिले सांसद पदमा मात्र छन् । उनी कुनै सरकारी पदमा छैनन् । तैपनि उनको यो भ्रमणलाई अनौठो मानिएको छ । भारत भ्रमणको क्रममा उनले डोभललाई पुन भेट्ने बताइएको छ ।
महत्वको काम छाडेर विदेश
देउवा सिंगापुमा छन् तर यता पार्टी चाहिँ लथालिंग छ । यो भ्रमण उनले टाल्न र टार्न सक्थे । पछि सार्न सक्थे, अगाडि सार्न सक्थे । तैपनि साउन २३ मै किन गए ? संवैधानिक परिषद्को वैठक छाडेर देउवा सिंगापुर गएका हुन् । देउवा अनुपस्थित भएपछि परिषद्को वैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश चयन गरी संसद समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
यति महत्वपूर्ण काम छाडेर देउवा विदेश गए । गोविन्द केसीको अनशसन र नेविसंघ र तरुण दलले जुलुस निकाल्दा विदेश भ्रमण स्थगित गरेका देउवा संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण वैठक छाडेर किन गए भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । र, यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न देउवाको डोभलसँग भेट भयो कि भएन भन्ने हो । डोभलसँग कसले भेट गर्यो भन्ने औपचारिक जानकारी कहिल्यै बाहिर ल्याइने गरेको छैन ।
को हुन् डोभल ?
अजित डोभल उग्र राष्टवादी मानिन्छन् । उनी कट्टर हिन्दूवादी हुन् । भारतीय गुप्तचर संस्था आईबीका निर्देशक थिए । उनी भारतका सर्वाधिक चर्चित गुप्तचर मानिन्छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि डोभलले एउटा संस्था चलाए । विवेकानन्द फाउण्डेसन नामक सो संस्थाले भारतीय उग्र राष्टवादको वकालत गथर््यो ।
नेपालमा संविधान बनाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बेला डोभलकै पहलमा कांग्रेसका शेरबहादुर, एमालेका माधवकुमार नेपाल र माओवादीका प्रचण्ड भारत बोलाइए । उनीहरुले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग विशेष भेट गरेर केही वाचा गरेका थिए । सो वाचा पूरा नगरी संविधान बनाएको भनी भारतले नाकावन्दी लगाएको जगजाहेर भइसकेको छ ।
वास्तवमा यी नेताहरुले भारत समक्ष के वाचा गरेका थिए ? आजसम्म खुलेको छैन । तर, नेपाली नेताहरुले गरेको वाचाको डिजाइनर उनै डोभललाई मानिन्छ । संविधान बनेपछि नेपाललाई नाकावन्दी गर्ने योजनाकार पनि उनै डोभाललाई मानिन्छ ।
भारतको विदेश नीति तय गर्ने र परिचालन गर्ने काम लगभग डोभल एक्लैले गर्छन्, विदेश मन्त्री स्वराज छायाँ मात्र मानिन्छिन् । यी डोभलको आगामी नेपाल रणनीति के छ ? अज्ञात छ ।
२०७५ श्रावण ३१ बिहीबार १७:१५:०० मा प्रकाशित